“Guddoomiyahayaga hadalkiisu maaha afkii Gudida Xanaanada Xoolaha, waxbana kama jiraan eedaha rarida macdan sharci daro” Xildhibaan xariir S. Ducaale – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)-Xildhibaan Xariir Siciid Bulaalle oo ka tirsan Gudidda Xanaanada Xoolaha iyo khayraadka Dabiiciga ah ee Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa naqdiyay eedo uu hore Gudoomiyaha Guddi hoosaadkooda Md. Siciid Maxamed Cilmi ugu jeediyey wasiirka
macdanta iyo biyaha Xuseen C. Ducaale inuu sifo sharci darro ah dalka uga raray sadex markab oo macdan ah, isla markaana cadeeyey inaan Guddoomiyaha Gudi hoosaadkaasi ku metelin Gudidooda eedaha uu u jeediyay wasiirka macdanta iyo biyaha.
Xildhibaan, Xariir Siciid Bulaalle oo daba socday eedo hore Guddoomiyaha Gudidooda ugu jeediyey wasiirka Macdanta iyo Biyaha Xuseen C. Ducaale, ayaa sheegay, “Waxaan doonayaa inaan ka hadlo war ka soo baxay Guddoomiyaha Gudidda xanaanada xoolaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee Golaha Wakiiladda oo aniguna xubin ka ahay gudidaasi. Guddoomiyaha Gudidaasi wuxuu ka hadlay oo ku eedeeyay Wasiirka macdanta iyo biyaha inuu raray sadex markab oo macdan ah, isla markaana weydiiyey heshiiskii uu la galay Ha’yado caalami ah iyadoo aanu jirin baatrool aynu leenahay oo la tixraaci karaaba, isagoo ku hadlaya afka Gudida.” Isagoo raaciyey, “Guddoomiyaha Gudidaasi eedaha uu u jeediyay Wasiirka macdanta ee uu yidhi lacag buu lunsaday iyo macdan buu raray ee ku hadlayay magaca Gudidda wax allaale iyo wax ka jiraa ma jiro, waxaan leeyahay afka uu ku hadlay ma aha afkii gudidda, Gudida xanaanada xoolaha iyo khayraadka dabiiciga ahna wax colaad ah oo ka dhaxaysa wasiirka macdanta iyo biyuhu ma jirto. Heshiisyadda uu galo Wasiirkuna anagu umana tagi karno mana waydiin karno oo ma odhan karno heshiiskii aad la gashay Ha’yadaasi ama wadankaasi keen, waayo shaqo aanu ku leenahay ma jirto. Wasiirku heshiiska uu galo wuxuu u gudbiyaa Golaha Wasiirrada cida kaliya ee aanu xaq u leenahay inaanu weydiinaa waa madaxweynaha. Wasiirka tallo iyo wax isku sheeg mooyaane’e wax kale oo naga dhaxeeyaa ma jirto.”
Xildhibaan Xariir S. Bulaale oo ka hadlaya sababta marka horumar loo dhaqaaqaba loo hordhigayo caqabado ayaa yidhi, “Waxaan leeyahay Guddoomiyaha Gudi hoosaadkayaga waa markii labaad ee iyadoo horumarin loo sameynayo deegaanada aan ka tirsan nahay uu geliyo khal khal. Xiligii xukuumadii hore wuxuu eedahan oo kale u jeediyay Wasiirkii Macdanta iyo Biyaha imikana wuu ku celiyay, waxaan isleeyahay waxa uu guddoomiyahagu hadalkan u yidhi wuxuu warbixin siinayaa cid kale,”ayuu yidhi.